SomaliaReport: AMISOM oo Sheegatay Guulo Waaweyn
Afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta Afrikaanka (AMISOM) ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaaladii ay dhawaan kula jireen malayshiyada al-shabaab balse ay kala qaybsani siyaasadeed xannibayso dadaalkooda.
Paddy Ankunda oo ah afhayeenka ciidamada AMISOM oo Muqdisho khadka Tv.ga kagala hadlayey saxaafadda caalamiga ee Nairobi ayaa ku tilmaamay guulahooda kuwo aad u weyn, wuxuuna intaa sii raaciyey inay u dhaw yihiin suuqa bakaaraha oo saldhigga u weyn u ahaa muddo sanado ah ururka al-shabaab. Wuxuu u sheegay suxufiyiinta in guulahani ay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee laga soo hoyey dagaaladii lagula jiray al-shabaab afartii sano ee la soo dhaafay.
“Waxaan la wareegnay aagag, 200 meter ayaan u jirnaa suuqa bakaaraha, waana markii u horaysay een sidaa ugu soo dhawaanay bakaaraha” ayuu yidhi Ankunda..
Afhayeenku wuxuu intaa raaciyey in haddii ay hoggaanka dawladda ku meel gaadhka ahi midoobaan ay ciidamada AMISOM si dhakhso ah kula wareegi karaan magaalada Muqdisho.
“Waqti aan kula wareegno Muqdisho ma cayimi karno. Dhibaatana uma aragno la wareegida muqdisho, waxaase naga maqan midnimadii iyo iskaashigi looga baahnaa hawlgalada milatari ee siyaasadeed si loo dardargaliyo guulaha caskar”i. Ayuu yidhi Afhayeneku.
Xogsiintan ayaa timid ka dib markii ay xoogagga AMISOM hawlaglo waaweyn la beegsadeen sitimaankii tagay ururka al-shabaab iyada oo ujeeddaduna ahayd in weeraro lagu qaado wadnaha malayshiyada ee Muqdisho.
Ciidamadan ka kooban 9,000 ayay hawshoodu tahay garab-siinta dawladda itaalka daran ee ay xoogagga al-shabaab isku dayayeen inay ridaan afartii sano ee la soo dhaafay.
Ankunda ayaa suxufiyiinta u sheegay inay xoogaggiisu bilaabeeninay weeraro iyagu ku qaadaan malayshiyada al-shabaab.
Ujeeddadeenu waxay ahayd in dagaalka iyaga lagu bilaabo, ilaaiyo haddana guulo ayaan ka gaadhnay. Ku talo-galkeenu waa inaysan naga guulaysan. Ayuu yidhi afhayeenku.